“Marudzi Achaziva Kuti Ndini Jehovha” | Swedera Pedyo naMwari
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Shona Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
“Marudzi Achaziva Kuti Ndini Jehovha”
WAIZONZWA sei dai waizopomerwa mhosva yausina kupara? Ko kana nyaya yacho ikaita kuti vamwe vanhu vakawanda vasina mhosva vatambure zvakanyanya? Hapana mubvunzo kuti waizoda kuratidza pachena kuti hauna mhosva. Unoziva here kuti ndizvowo zviri kuitwa Jehovha? Vakawanda vari kumupomera kuti ndiye anokonzera udzvinyiriri uye kutambura kwevanhu munyika yose. Asi Jehovha ane basa nokuchenesa zita rake here? Hongu! Ngatimbokurukurai zvinotaurwa mubhuku raEzekieri.—Verenga Ezekieri 39:7.
“Handichazobvumirizve kuti zita rangu dzvene risvibiswe,” anodaro Jehovha. Vanhu vari kutosvibisa zita rake pavanomupomera kuti ndiye ari kukonzera zvakaipa. Sei tichidaro? Kakawanda, Bhaibheri parinoti “zita” rinenge richireva mukurumbira wemunhu. Rimwe duramanzwi rinoti zita raMwari rinoreva “zvinozivikanwa nezvake, kureva kuzvizivisa kwaanoita uyewo rinomiririra mukurumbira wake uye kukudzwa kwake.” Zita raJehovha rinosanganisira mukurumbira wake. Chii chatinoziva nezvaJehovha panyaya youdzvinyiriri? Anohuvenga! Anotonzwira tsitsi vaya vanodzvinyirirwa. * (Eksodho 22:22-24) Vanhu pavanoti Mwari ndiye ari kukonzera zvinhu zvaanosema, vari kutosvibisa mukurumbira wake. Saka vanenge ‘vasingaremekedzi zita rake.’—Pisarema 74:10.
Ona kuti Jehovha akadzokorora mashoko okuti “zita rangu dzvene” kaviri. (Ndima 7) MuBhaibheri zita raJehovha rinotaurwa kakawanda panyaya dzine chokuita no“utsvene.” Shoko rokuti “utsvene” rinopa pfungwa yechinhu chabviswa pane zvimwe uye yokuchena kana kuti kusasvibiswa. Zita raJehovha idzvene nokuti muridzi waro mutsvene, kureva kuti haana kana chivi uye akachena. Uri kuona here kuti sei tichiti vaya vanopomera Jehovha kuti ndiye ari kukonzera zvakaipa vari kuzvidza chaizvo ‘zita rake dzvene’?
Chinangwa chaJehovha chokuchenesa zita rake achishandisa Umambo hwake ndiro dingindira guru reBhaibheri. Izvi zvinosimbiswa mubhuku raEzekieri iro rinodzokorora kuti: “Marudzi achaziva kuti ndini Jehovha.” (Ezekieri 36:23; 37:28; 38:23; 39:7) Ona kuti marudzi haasi kuzoita zvokusarudza kuti azive Jehovha. Asi kuti “achaziva.” Zviri kurehwa ndezvokuti Jehovha akaronga kuita chimwe chinhu chichamanikidza marudzi pasi pose kuti abvume kuti ndiye Jehovha, Changamire Ishe ane zita rinotsanangura zvaari, zvokuti iye mutsvene, haana gwapa, uye akachena zvachose.
Vimbiso inodzokororwa kakawanda yokuti “marudzi achaziva kuti ndini Jehovha,” inotova mashoko akanaka kune vaya vanotarisira kuona zvakaipa zvose nokutambura zvichipera. Munguva pfupi iri kuuya Jehovha achazadzisa vimbiso iyoyo obva achenesa zita rake zvachose. Achabvisa zvakaipa nevanozvikonzera oponesa vaya vanoziva uye vanoremekedza zita rake nezvarinomiririra. (Zvirevo 18:10) Izvi hazviiti here kuti ude kudzidza kuti ungaswedera sei pedyo naMwari mutsvene Jehovha, uyo anoda “kururamisira”?—Pisarema 37:9-11, 28.
Ndima dzeBhaibheri dzamunogona kuverenga muna September:
Ezekieri 39–Dhanieri 3
^ ndima 4 Ona nyaya inoti: “Swedera Pedyo naMwari—Anoda Kururamisira,” iri muNharireyomurindi yaNovember 1, 2008.